Iyaqala iWafa Wafa yodumo | News24
Iyaqala iWafa Wafa yodumo
UMQHUDELWANO waminyaka yonke noqhatha wonke amaqembu e-PSL akwazile ukuqeda isizini ephakathi kwayishiyagalombili okuqala, iMTN8 Wafa Wafa kubhekeke ukuthi iqale ngegiya eliphezulu.
Kulokhu kuningi futhi okuzoconsisa amathe nge Wafa Wafa ngendlela nje imidlalo ehlelwe ngayo.
Ngesikhathi kwenziwa idilo noma ngesikhathi amaqembu eqhathwa, kuningi okwenze amaphaphu abalandeli aba phezulu, ngoba phela ofishi abancane bazobhekana nabakhulu. Kusobala-ke ukuthi eminye yemiphumela ingaxaka noma ingaphathisa ikhanda abalandeli abaningi.
Lomqhudelwani uzoqala ngoLwesihlanu mhlaka 26 Agasti, nalapho omakoti beligi nabasanda kuthenga isitifiketi seMpumalanga Black Aces i-Cape Town City bezotholana neKaizer Chiefs eCape Town Stadium ngo 8 ebusuku.
Kanti eminye imidlalo nayo izokwenza abalandeli bahlahle amehlo imi kanje :
NgoMgqibelo mhlaka 26, iPlaninum Stars iyobhekana neChippa United ngo 3 ntambama eRoyal Bafokeng Sports Palace.
Kanti iBidvest Wits eyakwazi ukuqeda ilelele isithathu ngesizini edlule izoqhuthana amazenze neBhakaBhaka eBidvest Stadium ngo 8.15pm ngawo belu usuku olufanayo.
Omunye umdlalo ozoconsisa amathe ophakathi kweMamelodi Sundowns nomakhelwane iSuperSport United emdlalweni oyobe useLoftus Versfeld, ngeSonto mhlaka 28 Agasti.
Umqeqeshi woshampeni beligi ngesizini edlule uPitso Mosimane uthi ukuqhathwa kwabo neSupeSport United kubukeka kuzobanzima kodwa kuzoqinisa idolo kulethe namathemba ngomqhudelwano.
“Angichomi noma angiyibukeli phansi iSupeSport United, kodwa uma sikwazile ukubadla, indlela yethu isiyoba lula emidlalweni elandelayo.
Phela uma uqale nzima empilweni uvamisile ukugcina ngokulula. Kodwa singakhohlwa ukuthi kahle kahle ayikho ithimu elula kwiWafa Wafa,”kusho uMosimane.
Umdlalo wamanqamu uhlelelwe ukuthi ube ngomhlaka 1 Okthoba, kanti kuthiwe imidlalo eyandulela owamanqamu izoba mhlaka 10 kuSepthemba kuya kumhlaka 17 Septhemba.
Okunye okubhekwe kakhulu nokuconsisa amathe ukuthi umdlalo weKhosi neCape Town City uzobe uqhathe abaqeqeshi abasafufusa kodwa abahlonishwayo ngamagalelo abo uSteve Komphela noEric Tinkler.
Kungenzeka lesizini umfoka Komphela ayibone inzima kakhulu ngoba phela obasi bakhe bathe akalethe izinkomishi futhi abuyise udumo oludala.